Maareynta Ganacsiga Yaryar Talooyin wax ku ool ah oo loogu talagalay Guusha - Wareegga Hantida
Bogga ugu weyn Maareynta Ganacsiga Yaryar Tilmaamaha Waxtarka leh ee Guusha
Maareynta Ganacsiga Yaryar Tilmaamaha Waxtarka leh ee Guusha
Maareynta Ganacsiga Yaryar (SBM) waxaa loola jeedaa isku-dubbaridka iyo isku-dubbaridka dhammaan qaybaha ganacsiga yar-yar, hadday tahay maaraynta shaqaalahaaga, alaab-qeybiyeyaasha, dhaqaalaha ganacsiga, khariidaddeeda, ama fulinta hawlahaaga maalinlaha ah.
Maaraynta meherad yar ayaa milkiilaha u soo bandhigaysa caqabado aan loo sinnayn. Marka laga reebo aqoonta mabaadi'da aasaasiga ah ee ganacsiga yar-yar, sidoo kale waa inaad taqaanaa maareynta shaqaalaha, maareynta maaliyadda, iyo sharciyada iyo xeerarka la xiriira ganacsigaaga.
Si loo fahmo fikradda, Maareynta Ganacsiga Yaryar, jawaabaha waxay qeexayaan su'aalaha soo socda:
Waa maxay ganacsi yar?
Waa maxay Maareynta Ganacsiga Yaryar?
Sidee ganacsiyada yaryar loogu maareeyaa si guul leh?
Muxuu sameeyaa maamulaha ganacsiga yar yar?
Boqolkii intee le'eg ayay tahay in ganacsigaagu noqdo maamul?
Akhri Sidoo kale: 21ka Shabakadood ee Maareynta Lacagta ee ugu sarreeya 2021 -ka
Waa maxay Ganacsiga Yaryar?
Marka loo eego Xafiiska Tirakoobka Mareykanka, qiyaastii 99.7% dhammaan shirkadaha Mareykanka waa ganacsiyo yaryar.
Inkastoo aysan jirin heshiis guud oo ku saabsan waxa ka kooban ganacsi yar, Maamulka Ganacsiga Yaryar (SBA) wuxuu caadi ahaan tixgelinayaa shirkad leh in ka yar 500 oo shaqaale ah inay noqdaan ganacsi yar.
Marka laga reebo tirada shaqaalaha, SBA waxay isticmaashaa wakiillo kale si ay u go'aamiso in shirkaddu tahay ganacsi yar.
Tusaale ahaan, ganacsigu ma wuxuu ku yaalaa oo ka shaqeeyaa Maraykanka? Ma ciyaaryahan laga tirada badan yahay? Ma si madax bannaan baa?; Intee in le'eg ayay ganacsigu faa'iido u leedahay? iwm.
Ujeedada ay ganacsiyada ugu kala saaraan ganacsiyo yaryar ayaa ah in maamulka iyo arrimaha shaqo ee ganacsiyadani ay aad ugu kala duwan yihiin shirkadaha waaweyn ee dadweynaha.
Markaad sheegto waxa ay ula jeedaan ganacsi yar, waxaad ku guuleysan kartaa qandaraasyo waxaadna ka faa'iideysan kartaa amaahda ganacsiga ee dawladda oo aad heli kartaa qalab kaa caawin kara inaad la tartanto ganacsiyada waaweyn.
Si ka duwan shirkadaha waaweyn ee xaddidan, ganacsiyada yaryar waxay leeyihiin miisaaniyad xaddidan, xafiisyo aad u yar, iyo laga yaabee inay u adeegaan kaliya juqraafiga gobolka.
Waxay diiradda saarayaan bixinta adeegga macaamiisha oo casri ah iyo ka faa'iidaysiga hal-abuurka iyo hal-abuurka si loo soo saaro alaab iyo adeegyo ka wanaagsan.
Akhriso: 20 Fikradaha Ganacsi Bilowga Ugu Fiican Si Lacag Loogu Sameeyo 2021
Laga soo bilaabo abuurista ganacsi, go'aaminta shuruudaha maalgelinta, maaraynta shaqaalaha, kormeerida suuq-geynta iyo xayaysiinta, iyo maaraynta wakhtigaaga, maaraynta ganacsiga yaryar waxay ku lug leedahay isku-dubbaridka dhammaan qaybaha ganacsiga si loo hubiyo in uu sii wado koritaanka iyo xaqiijinta guusha.
Waa kuwan waxyaabo ay tahay inaad ka ogaato maaraynta ganacsiga yaryar:
1. Abuur Qorshe Ganacsi
Si aad u abuurto qorshe ganacsi oo wax ku ool ah, tax hadafyadaada iyo yoolalkaaga ganacsi oo samee qodobbo sharaxaad kooban oo ku saabsan ganacsigaaga iyo badeecadaha ama adeegyada.
Waxa kale oo laga yaabaa inaad rabto inaad ku darto faahfaahinta ku saabsan suuqa aad doonayso inaad gasho, qorshayaashaada iibka, suuqa, iyo saadaalintaada maaliyadeed.
Dib u eegis ku samee yoolalkaaga ganacsi si joogto ah si aad u ogaato waxa isbedelay, waxa aad qabatay, iyo waxa u baahan in la hagaajiyo.
2. Kala saar dhaqaalahaaga shaqsi iyo kan ganacsiga
Maadaama canshuuraha adiga iyo ganacsiga si taxadar leh looga fikiray si gaar ah, waxaa muhiim ah in la furo xisaabaadka gaarka ah ee leh calaamad gaar ah oo loogu talagalay kaliya macaamil ganacsi.
3. Go'aami Shuruudaha Maalgelinta
Haddii aad hadda bilaabayso ganacsi cusub, inaad maalgeliso hawlaha ganacsiga ayaa ah mudnaanta ugu sareysa.
Haddii aad dooranayso maal-gelinta malaa'igaha, ganacsi-kicinta, maalgashiga shakhsi ahaaneed, deymaha bangiga, ama deeqaha dawladda, waa lagama maarmaan inaad barato mudnaanta iyo cilladaha ilahan maalgelinta iyo heerarka ay u isticmaaleen si ay u qiimeeyaan ganacsiga.
4. Shaqaalayso Dadka Saxda ah
Haddii aad rabto in ganacsigaagu kobco, waxaa lama huraan ah inaad shaqaaleysiiso dadka dhiirigeliya, tababaran, tamar sare leh kuwaas oo guusha ka dib halkii aad samayn lahayd cajiin degdeg ah.
Milkiile ganacsi yar ahaan, waa inaad ogaataa sida loo ilaaliyo shaqaalaha aadka u qiimaha badan adoo siinaya awoodaha gunnada, sida jadwallada dabacsan, saacadaha farxadda, iyo hawlaha koox-dhisidda.
5. Tababar shaqaalahaaga
Haddii aad shaqaaleysiiso shakhsiyaadka ugu caqliga badan ama ugu ifka badan adduunka, waxay qaadan doontaa wakhti si ay u fahmaan gudaha ganacsigaaga oo ay u tilmaamaan sida aad wax isugu geeyaan si aad u fuliso yoolalka mustaqbalka fog.
Tani waa sababta tababarka shaqaalahaaga si wanaagsan ay muhiim ugu tahay ganacsi yar. Samee qorshe tababar oo ka dhigi doona shaqaalahaaga inay dareemaan karti badan oo awood u leh shaqadooda.
6. La Soco Dhaqaalahaaga
Marka aad bilowdo ganacsi cusub, kuma adkaan doontid in aad la socoto lacagta soo galaysa meheradda ka baxaysa.
Si kastaba ha noqotee, maadaama aad leedahay hawlo ganacsi oo badan, waxaad ogaaneysaa in hawshu ay noqon karto madax xanuun.
Tani waa sababta aad ugu baahan tahay inaad shaqaaleysiiso xisaabiye waqti-buuxa ah, ama aad maalgeliso barnaamijka xisaabaadka oo si fudud loo isticmaali karo kaasoo kaa caawinaya inaad la socoto dhaqaalahaaga oo badbaadiya dhaqaalahaaga qaaliga ah.
7. Maalgelinta Suuqgeynta
Adduunyada ay summaduhu si aan kala joogsi lahayn ula dagaallamayaan dareenka macaamiisha, ganacsiyada yaryar waxay u baahan yihiin inay hortooda ku riixaan shakhsiyaadka, tusiyaan wax qiimo leh oo ay si uun u dhegaystaan ​​calaamadahooda.
Baadh xayeysiisyada ganacsiga yar yar ee kala duwan iyo beddelka suuqgeyntu ka hor inta aanad dooran nooc suuqgeyn oo sida ugu fiican adiga iyo ganacsigaba ugu shaqayn doona.
8. Baro Ergada
Maareynta waqtiga ayaa muhiim u ah milkiilayaasha ganacsiga yar yar. Maareynta wakhtigaaga waxa ku jira in aad awood u leedahay in aad shaqo u magacowdo shaqaalaha aadka u wanaagsan ee aad qoratay oo aad tababartay-gaar ahaan hawlo aanad runtii ku helin wax lagu raaxaysto ama kuwa aad ogtahay in aanad ku fiicnayn.
Muxuu Sameeyaa Maamulaha Ganacsiga Yaryar?
Meherad yar, milkiilayaasha ayaa iyagu maamuli doona ganacsiga ama waxay shaqaaleysiin doonaan qof (maamulaha ganacsiga) si uu u maareeyo hawlaha ganacsiga.
Maareynta ganacsi yar waxay keenaysaa in la yeesho aqoon ama faham kala duwan oo la xidhiidha mawduucyada ganacsiga.
Waa shaqada maareeyaha inuu kormeero arrimaha shaqaalaha; shaqaaleysiinta, tababarida, iyo qiimaynta shaqaale cusub iyo hubinta in ganacsigu uu ku socdo wadadii saxda ahayd ee uu ku gaadhi lahaa yoolkiisa maaliyadeed.
Hoos waxaa ku taxan qaar ka mid ah mas'uuliyadaha muhiimka ah ee milkiilaha ganacsiga yar:
La soco arrimaha maalinlaha ah ee shaqaalaha
Shaqaale qorto, qorto oo tababaro shaqaale cusub
Hubi in hawl-maalmeedka ay si habsami leh u socdaan
Maamul alaabta oo samee go'aannada iibka
Xakamaynta wax soo saarka, suuq-geynta iyo hawlaha maamulka
Naqshad oo dhaqangeli miisaaniyadda shirkadda
Deji yoolalka iibka oo hubi in kooxdu ay ku socoto waddadii ay ku fulin lahayd
Hubi in yoolka maaliyadeed ee ganacsiga la gaarayo
Sidee Si Guul Ah Loogu Maareeyaa Ganacsiga Yaryar?
Si aad si guul leh u maamusho ganacsigaaga, si fudud:
Ururku waa furaha lagu gaadho guusha ganacsiga.
Dhammaan ganacsiyada guuleysta waa inay xafidaan diiwaanno faahfaahsan.
Waa inaad qiimeysaa tartankaaga. Dhanka kale, waa in la ogaadaa in tartanka uu dhaliyo natiijooyinka ugu fiican.
Isku day inaad fahanto khataraha iyo abaalgudka.
Waa inaad noqotaa mid hal abuur leh.
U diyaargarow inaad wax u hurto.
Samee bixinta adeeg weyn.
Saamiga caadiga ah ee shaqaaluhu wuxuu u dhexeeyaa 4-ilaa-1 warbixinaha tooska ah ee ku socda madaxweyne ku xigeenka gobolka ama maareeyaha sare, ilaa 20-ilaa-1 fasalka maamulka.
Inta badan fasalada, qiyaastii 10 shaqaale maamule kasta waa caadi. Inta ay le'eg tahay xakamaynta ayaa ah go'aamiye weyn, xitaa gudaha isla waaxda.
Maxay yihiin Qaar ka mid ah Talooyinka loogu talagalay Maareynta Ganacsiga Yaryar ee Waxtarka leh?
Waxay kala yihiin:
1. Wax ka baro macaamiishaada
Markay shirkadu sii fidayso, waa muhiim inaad fiiro gaar ah u yeelato jawaab celinta macaamiisha.
Way fududahay in la iska fogeeyo jawaab-celinta taban, haddana labada dhaleecayn wax dhisaya waxay qiimo u yeelan karaan ganacsigaaga.
2. Mudnaanta sii taageerada macaamiisha
Kala horraysiinta adeegga macaamiisha waxay u oggolaanaysaa shirkaddaada inay u beddesho macaamiisha aan ku qanacsanayn macaamiil daacad ah. Waxaad xallin kartaa dhibaatada oo aad ilaalin kartaa ballanqaadkaaga calaamad haddii aad halkaas joogi karto qanjaruufo.
Intaa waxaa dheer, adeegga tayada sare leh wuxuu u horseedi karaa kor u qaadista wacyiga sumadda, daacadnimada, iyo kalsoonida.
3. U fiirso meesha aad ku nooshahay.
Way fududahay inaad ku faraxsanaato ganacsi cusub iyo rabitaanka inaad ku fido suuqyo cusub.
Is faafinta aad u khafiifsan waxay keeni kartaa in la lumiyo fursadaha lagu lug lahaado dhegaystayaal kooban.
4. U gaarsii macaamiishaada khibrad xusuus leh.
Tixgeli qaar ka mid ah noocyada aad ugu jeceshahay; waa maxay waxa iyaga ku saabsan oo kaa dhigaya inaad rabto inaad la socoto iyaga?
Adeegga macaamiishu waxa uu leeyahay saamayn cascading ah. Haddii aad si fiican u fuliso, dukaankaaga internetka waxa uu dareemi doonaa korodhka wacyiga summadaha, taraafikada, iyo macaamiisha daacada ah.
5. Noqo mid waqti badan leh
Waxaad xidhataa koofiyadaha badan sida milkiile ganacsi yar ahaan.
Waxaad noqon doontaa maamulaha guud, Suuqgeynta Dijital ah iyo Maareeyaha Ecommerce, Maareeyaha Saadka, iyo wixii la mid ah shaqadaada.
Waa inaad si hufan u maamushaa wakhtigaaga marka ay shirkadu korayso.
6. Hel dheelitirnaan
U diyaari habeennada dambe iyo subaxda hore, guulo iyo guuldarrooyin, iyo safarro dib ugu noqoshada guddiga sawirka. Waxay u baahan tahay dadaal badan si aad u yeelato oo aad u maamusho ganacsi yar.
Taasi waa sababta ay muhiim u tahay inaad isku dheelitirto shaqadaada maalinlaha ah.
7. Ha ka baqin xafiiltanka ka weyn oo ka sii dhisan
Suuqa tartanka dhexdiisa, waxaad tahay hilib cusub. Taasi waxay noqon kartaa mid cabsi leh.
Maskaxda ku hay in aad suuqa u keenayso badeecooyin cusub sababtoo ah waxaa jira baahi loo qabo. Waxaad ku leedahay faa'iido gaar ah kuwa kula tartamaya.
8. Dagaaladaada u dooro si xikmad leh
Waa muhiim inaad si sax ah u doorato dagaalkaaga, sida ay tahay nolol maalmeedkaaga.
Way adkaan kartaa in la bilaabo ganacsi oo aad soo marto xanuuno sii kordhaya. Si aad u sii waddo jidka guusha, xoogga saar hantidaada iyo qorshayaashaada ugu qiimaha badan.
9. Baro inaad noqoto qof dabacsan
Waa maxay macnaha ay tani u leedahay milkiilayaasha ganacsiyada yaryar? Inaad la qabsato isbeddelka oo had iyo jeer diyaar u ah inaad aqbasho waxa soo socda waxay kuu oggolaanaysaa inaad si fiican u dhegaysato saldhigga macaamiishaada. Waxaad hal talaabo ka horayn doontaa tartanka tan darteed.
10. Run ka noqo ganacsigaaga
Sida aad u aasaastay shirkad kuu gaar ah maadaama ay baahi ka jirtay suuqa. Waa inaad u muujisaa fariintaada dhabta ah iyo tan organic u ah macaamiishaada haddii aad u rumowdo hamigaaga iyo himiladaada.
Ha la socon socodka.
Noocyada Maareynta Ganacsiga Yaryar
Istaraatiijiyad: horumarinta yoolalka iyo samaynta qorshayaasha lagu xaqiijinayo yoolalka.
Cilmi-baarista Suuqa: horumarinta fahamka suuqyada, baahiyaha macaamiisha iyo tartanka.
Kooxda Maareynta Ganacsiga Yaryar
Kooxaha waxaa ka mid ah:
Madaxa fulinta (CEO). Maamule guud waa hogaamiyaha kooxda maamulka wuxuuna qabtaa dhammaan go'aamada kama dambaysta ah.
Madaxa Hawlgelinta (COO)/ Madaxweyne.
(CFO) – Madaxa Maaliyadda.
Madaxa Suuqgeynta (CMO).
Astaamaha Ganacsiga Yaryar
Waxaa iska leh oo maamula milkiilayaasha laftooda.
Waa xidhiidh muhiim ah oo ka dhexeeya shaqo-abuurista sababtoo ah habkeeda xoogga leh ee shaqada.
Qadarka loo baahan yahay in lagu bilaabo inta badan waa mid hooseeya marka loo eego ganacsiyada waaweyn.
Ganacsiyada yaryar waxay caadi ahaan ku yaalaan gobollada deegaanka.
Meherad yar ayaan bilaabo?
Markaad go'aansato inaad haysato waxa ay ku qaadanayso inaad ku shaqeyso ganacsigaaga, tallaabada xigta ee aad qaadi doonto waxay noqon doontaa inaad go'aansato nooca ganacsiga aad rabto inaad bilowdo. Mar labaad, waxaad tahay qofka kaliya ee go'aamin kara ganacsiga adiga kuu fiican. Marka la eego su'aasha sare, waxaad ku bilaabi kartaa qiimeynta xirfadahaaga, kartidaada, iyo kartidaada.
Sideen u suuq geeyaa badeecadayda ama adeeggayga?
Xaqiiqdu waxay tahay iibku kaliya ma bilaabi doono inuu dhaco. Waxaad fahantay in iibku u dhaco suuqgeyn darteed. Ganacsiyadu waxay isticmaalaan cilmi-baarista suuqa si ay u ogaadaan macaamiishooda iyo waxay rabaan inay iibsadaan.
Sideen u maalgeliyaa ganacsigeyga?
Jawaabta taasi waa u heellanaantaada maalgelinta shakhsi ahaaneed inta badan waa tallaabada ugu horreysa ee maalgelinta. Waxay u shaqeysaa sidii calaamad muujinaysa sida aad uga xun tahay ganacsiga. Si aad halis ugu noqoto lacagta shakhsi ahaaneed waxay u gudbisaa fariinta kalsoonidaada maalgashadayaasha. Ilaha maalgashiga shakhsi ahaaneed ee raasumaalka waxaa ka mid noqon kara kaydka, socodka lacagta caddaanka ah, dakhliga shaqada labaad, sinnaanta guriga ama sinnaanta, kaas oo ka yimaada hanti kale ama hanti, xisaabaadka hawlgabka, khadadka deynta shakhsi ahaaneed, iyo kaararka deynta shakhsi ahaaneed. Beddeladan waxaa ku jira khataro gaar ah.
Sideen u habayn karaa ganacsigayga?
Waad ogtahay in ay sameeyaan ganacsiyada yaryar intooda badan sida mulkiilayaal keligood ah. Mudnaanta mulkiilaha keligiis ah waa dabeecadda aan isku dhafanayn iyo xaqiiqda ah in ay u maamulaan dakhliga ganacsiga si la mid ah dakhliga shakhsi ahaaneed ee canshuurta. Hoos u dhac muuqda ayaa ah in adiga, oo ah milkiilaha, aad qaadato deynta shakhsi ahaaneed ama mas'uuliyadda falalka ganacsiga.
SBM ma ka caawin doontaa buuxinta shuruudaha waxbarashada?
SBM waxay u qalantaa qaybta doorashada ee 5-saacadood ee shuruudaha waxbarashada sii wadida ee qasabka ah ee CCB.
Maareynta meherad yar waxa ay ka dhigantahay in aad maarayso dhamaan qaybaha ganacsigaaga, haday tahay wakhtigaaga, shaqaalahaaga, iyo agabka kale sida ugu macquulsan.
Barashada habab cusub oo lagu maareeyo aagaggaas, waxaad ka dhigi kartaa ganacsigaaga mid waxtar leh, noloshaadana xitaa sahlan.
Qeexitaanka Maareynta Ganacsiga: Wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ogaato
30-ka Buugaag ee Maamulka Ganacsiga ugu Fiican 2021
Sida Loo Bilaabo Meherad South Carolina 2021: Tusaha Ugu Dambeeya, Tallaabo-tallaabo
Waxaa lagu taxay tobanka gobol ee ugu sarreeya Mareykanka Pro-ganacsi, ka bilaabista ganacsi South Carolina waa doorasho weyn…
Sida Loo Bilaabo Ganacsiga Guriga: Tusaha Ugu Dambeeya, Tallaabo-tallaabo
Ha ka xishoon inaad bilowdo ganacsi guri sababtoo ah laba ka mid ah seddexdii shirkadoodba waxay ku bilowdeen sidii…
Sida Loo Bilaabo Ganacsi Sharciyeynta Midiyaha 2022 | $ 100/hr Lacag Degdeg ah
Dhammaanteen waxaan isticmaalnaa mindiyo guriga, iyo meelaha kale iyo kuwan mindiyaha ayaa caajiso waqti ka dib. Halkii…
27 Shirkadood ee Bixinta Mushaharka ugu Fiican Sanadka 2021 | Hagaha Khabiirka
Kahor intaanan ka hadlin waxa ugu fiican ee shirkadaha dibadda ka bixiya mushahar bixinta, waxaa fiican in la fahmo in abaabulka shirkad…